Fanentanana japoney hafakely amin’ny famoahana karazam-bary vaovao, ao anaty fararano indrindra · Global Voices teny Malagasy
Afa-mampahaliana mpanjifa sy mampiroborobo varotra ve ny marika vary vaovao?
Voadika ny 01 Oktobra 2021 4:52 GMT
Tanimbary koshihikari akaikin'i Sakai, Fukui. Saripikan'i Nevin Thompson. Lisansa: CC-BY-3.0
Tafiditra ao amin'ilay famoahana amin'ny fomba ofisialy ny marika vaovao manerana an'i Japan ny hiran-dokambarotra iray hafakely, ny fifaninanana sary amin'ny media sosialy, ary ny fahatsapana hitsinjovana hisian'ny “vary vaovao” (新米) satria ho tonga eny amin'ny talantalan'ny fivarotana manerana ny firenena ny vokatra vao nojinjaina mandritra ny volana septambra sy oktobra.
Ilay vary dia antsoina hoe Ichihomare (いちほまれ), ary ilay dokambarotra dia mampiseho gonimbary mahalany olona mandihy, sy tanoravavy roa manao satroka miendrika voambary. Misy ihany koa, mazava loatra, fifantohana akaiky amin'ny vary efa nohandroina anaty vilia, vao avy eny an-tsaha.
Ireo roa mandihy dia ahitana an'i Honda Miyu (本田 望結), fanta-daza japoney sady vao misondrotra ao amin'ny fampitam-baovao, sy ny zandriny eo amin'ny taona antsoina hoe Sara (本田紗来), izay malaza ihany koa amin'ny fikorisana artisitika. Manana fantsona YouTube iraisana izy mirahavavy, ary avy ao amin'ny prefektioran'i Kyoto, izay mifanila amin'i Fukui ao andrefan'i Japan.
Amin'ny maha-anarana marika azy, nosafidiana avy amin'ny anarana miisa 100.000 tanatin'ny fifaninanana iray tamin'ny taona 2016 ny Ichihomare. Raha adika, ny “ichi” ao amin'ny Ichihomare dia midika hoe “ny tsara indrindra,” tahaka ny hoe “ny tsara indrindra eto Japan,” “ny matsiro indrindra.” Ny “Homare” indray dia azo adika hoe “loka” ao Japan, ka ny mety ho dikan'ny Ichihomare dia “tampom-boninahitra” amin'ny tsiro.
Tanimbary amin'ny faran'ny volana jolay ao Sunagare, Tsuruga, prefektioran'i Fukui. Saripikan'i Nevin Thompson. Lisansa sary: CC-BY-3.0
Ny vaomieran'ny fampiroboroboana ny varin'i Fukui (ふくいブランド米推進協議会), andrim-panjakana iray, sy ny koperativan'ny fambolena ao Fukui no namokatra ny fanentanana fampiroboroboana, ka ao anatin'izany ny tsipalotra amin'ny fahitalavitra.
Kely i Fukui, azo lazaina ho prefektiora ambanivohitra ahitana mponina 800.000 miorina amin'ny morontsiraky ny Ranomasin'i Japan. Raha malaza amin'ny dinôzaoro, mpandray anjara goavana amin'ny indostirian'ny tahon-tsolomaso, ary mampiatrano ny fahamaroan'ny toeram-pamokarana hery nokleary indrindra eto amin'ny planeta, dia manana ny tanjany ihany koa i Fukui raha ny vary no resahana. Ny Koshihikari, sady karazam-bary ankafizin'ny maro indrindra sady mariky ny anaran'ny vary botry Japonica ao Japan, ary vokarina manerana izao tontolo izao tamin'ny voalohany indrindra dia nokarakaraina tao amin'ny prefektioran'i Fukui taorian'ny ady lehibe faharoa.
Fahamasahan'ny vary koshihikari ram-piandohan'ny volana Septambra any Tsuruga, Fukui. Saripikan'i Nevin Thompson. Lisansa sary: CC-BY-3.0
Amin'ny maha-marika sy karazam-bary Japonica vaovao azy, ny ichinomare dia mifototra amin'ny koshihikari. Araka ny tranonkala ofisialin'ny ichinomare, ny karazany vaovao, raha natao hanintonana mpanjifa manerana an'i Japan, dia namboarina amin'ny fototarazony ihany koa hahazaka voalavo, mihena ny zezika sy famonoam-bibikely ampiasaina, ary kely kokoa ny rano ampiasaina.
Na izany aza, ny fanamby lehibe kasaina hovahan'ny ichinomare dia ny fiovan'ny toetrandro. Araka ny Sake Guide, tao anatin'ny 100 taona, nitombo 1,15°C — tokony ho roa avo heny miohatra noho ny an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny — ary heverina mbola hiakatra 2,1 hatramin'ny 4,0°C ao anatin'ny taonjato manaraka ny fiakaran'ny maripana an-tanety ao Japan. Ao anatin'izany vanim-potoana izany, tsinjovina hihena hatramin'ny 20 isanjato ny tanimbary any amin'ny faritra sasany ao Japan.
Olana atrehin'ny mpamokabary ao Fukui mivantana dia ny tsy ankafizan'ny ao Japan azy loatra intsony noho ny taloha.
Talohan'ny valan'aretina, mahalany vary 82 kg isa-taona ny japoney iray amin'ny ankapobeny. Raha niakatra ny fanjifana vary tany Japan nandritra ny fotoana nanjakan'ny valan'aretina — misy ny siosion-dresaka fa nisy ny fitomboan'ny fanjifana satria “sakafo fiononana” ny vary nandritra ny fotoana mahabe rarintsaina vokatry ny COVID-19 — fa amin'ny ankapobeny efa mihena ny fihinanan'ny olona azy.
tanimbary akaiky tanandehibe tamin'ny Mey, tao Showa-cho, Tsuruga. Saripikan'i Nevin Thompson. Lisansa sary: CC-BY-3.0
Lasa mametraka fahasarotana (fanamby) ho an'ny prefektiora ambanivohitra ao Japan tahaka an'i Fukui, izay matetika mifototra amin'ny famokaram-bary ny fampiasana ny tany akaiky tanandehibe sy ambanivohitra, ny fihenan'ny fanjifana vary. Manerana an'i Japan, anjakan'ny tantsaha mpamboly vary madinika, izay misahana ny anjara tanin'ny fianakaviana ho fidiram-bola fanampiny, sady omen'ny governemanta fanampiana goavana, ny sehatra.
Fahasarotana (fanamby) amin'ny fivarotam-bary noho ny fijotson'ny tinady izay matetika manome fakampanahy ny tantsaha hiova vokatra hafa, na hijanona tsy hamboly fotsiny izao. Lalana iray hampielezana ny fahalianan'ny mpanjifa, ary antenaina hampiroborobo ny varo-bary manerana an'i Japan ny ezaka fanomezana marika sy fampiroboroboana, tahaka ny fanentanana Ichihomare an'i Fukui.
Antenaina ny fanentanana vaovao Ichinomare hanova izany rehetra izany. Ankilan'ny dokambarotra fahitalavitra, nisy ihany koa ny fifaninanana sary tamin'ny septambra teo izay nanasana ny olona hampifaninana sary tanimbary avy amin'ny faritra rehetra manerana an'i Japan, sy izay karazana vary (fa tsy ny karazam-bary ichinomare tian'i Fukui ihany).
Izao no vanimpotoana izay itsinjovantsika ny fahatongavan'ny vary vaovao (新米) eny amin'ny fivarotana.
Prefektiora #Fukui lalamby #Katsuyama #Echizen fiaran-dalamby an-toerana, sary fiaran-dalamby, tanimbary
Fifaninanana sary tanimbary #Ichinomare
Raha te-hahazo ny tsiron'ny tanimbary ao Japan mandritra ny fararano, jereo [araho] ireo sary nampidirina hanaovana fifaninanana sary Ichihomare (nekena hatramin'ny faha-15 septambra 2021 ny fandefasana ny sary) ao amin'ny Instagram sy ao amin'ny Twitter. Holazaina amin'ny tapaky ny volana oktobra ao amin'ny tranonkala ofisialy Ichinomare ireo nahazo loka amin'izany fifaninanana izany.